ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၆-၆-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၁၆-၆-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- နောက်ကြောင်းပြန်တဲ့ အဓိကရုဏ်းတွေထဲ မပါဖို့ လွှတ်တော်အမတ် တိုက်တွန်း (ရုပ်သံ) click
- ဆူးလေစေတီ၌ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လူတဒါဇင်ခန့် ဆုတောင်း (ရုပ်သံ) click
- တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ DKBA ဦးဆောင် ပြုလုပ်ပြီ click
- ရခိုင်ပါတီနှစ်ခု ပေါင်းစည်းရန် ဆုံးဖြတ် click
- အချိုးကျကိုယ်စားပြု ရွေးကောက်ပွဲစနစ် PR ကို မွန်ပြည်သစ် လက်မခံဟု ပြော (ရုပ်သံ) click
- မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ဒုတိယဥက္ကဌ နိုင်ရဿ ကွယ်လွန်ခြင်း click
- ပအိုဝ်းအမျိုးသားတပ်မတော် ပြည်သူ့စစ် ကွပ်ကဲရေးမှူးနှင့် … (အင်တာဗျူး) click
- ညီနှောင်တိုင်းရင်းသား ၁၅ ပါတီ ဖက်ဒရေးရှင်း အစည်းအဝေးမှာ ဘာတွေကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသလဲ click
- တအာင်းဌာနေ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး အခြေချနေထိုင်နိုင်မည့် တအာင်းပြည်နယ် ဖော်ဆောင်ရန် သင့်/မသင့် လေ့လာရေး သုသေတနစစ်တမ်း click
- ဘာတေးလစ်တနာရဲ့ ၁၉၈၈ အရေးတော်ပုံစာအုပ် ဒေါမာန်ဟုန် မြန်မာပြည်မှာ ဦးဆုံးထုတ်ဝေ (ရုပ်သံ) click
- မလွတ်လပ်ဘဲနဲ့ လုပ်ရတဲ့ အနုပညာဆိုရင် အနည်းနဲ့အများ ကျဉ်းကျပ်မယ် click
- ပရိသတ်မုန်းမှာစိုးလို့ မလေးရှားနဲ့ တွဲဖက်ရိုက်မယ့်ရုပ်ရှင်မှာ ပြေတီဦး မပါလိုဟု ပြော (ရုပ်သံ) click
မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီ တကယ်ရဖို.ဆိုရင် အဓိက အကျဆုံးက တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပါ ။
ဥပဒေအထက်မှာ ဘယ်သူမှမရှိစေရပါဘူး ၊ ရှိလာရင်
တာဝန်ရှိ အဖွဲ.အစည်းကအရေးယူရမယ် ၊ အဲဒါကိုလည်း
media မှာပြည်သူကို အသိပေးဖေါ်ပြရမှာ ၊
... တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီ ဖွဲ.ပြီးနောက် မြန်မာ
ပြည်မှာ စစ်တပ် ၊ ရဲ ၊ တရားရေး အပါအ၀င် ဌာနဆိုင်ရာ
တွေရဲ.အကျင်.ပျက်ခြစားတာတွေ ၊မြေသိမ်း ၊လယ်သိမ်း၊
ယာသိမ်း တွေ ကို ထိထိမိမိ အရေးယူပြီး စံနမူနာ အဖြစ်
အရေးယူလိုက်တာတွေ media တွေမှာ ပါလာတော.မလား ပြည်သူတွေ မျှော်လင်.
... တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီ က ဒါတွေ လုပ်တာ
မရှိ သလောက် အပြင် ဥက္ကဌ ကိုယ်တိုင်တောင် ဥပဒေ
မဲ.ကိစ္စအချို.မှာ (ဥပမာ- ဦးပိုင် ရဲ. ကြေးနီစီမံကိန်း)
တောင် ဥပဒေအထက်ကသူတွေ ဘက် ကရပ်ပေးတာတွေ.ရတယ် ။
... အဓိက ပြောချင်တာက ဘာဘဲလုပ်လုပ်
ပြည်သူတွေကို တော. သစ္စာမဖေါက်ပါနဲ. ။
ယနေ. တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ရအောင် မလုပ်နိုင်ဘဲနဲ.
နောင် (၂၀၁၅) ရွှေပဒေသာပင်ကြီး ............
..... မြေက ပေါက်လာမယ် မထင်လိုက်ကြပါနဲ. ။ ။ ။
စပ်ကူးမတ်ကူးကာလမှာ အနေအစား ချောင်စွာနဲ့ လုပ်စားနေတဲ့ ဌာနတွေ
ရှိတယ်။ ပြည်ထောင်စု အစိုးရက ကွပ်ကဲနေသလိုလို တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်
နယ်အစိုးရက ကွပ်ကဲနေသလိုလိုနဲ့ ချမ်းသာနေတာကတော့ စည်ပင်တွေပါပဲ
ကော်မတီတွေ သေချာဖွဲ့ သေသေချာချာကြီးကြပ်သင့်နေပြီ။
ဈေးထဲမှာ သမာဓိချိန်ခွင်ကမရှိ အလေးကခိုး ရေကထိုး မကျေနပ်လို့
ဈေးခေါင်းတိုင်မယ်လုပ်တော့ ဈေးခေါင်းက စည်ပင်က အရာရှိတွေအိမ်
ဈေးခြင်းတောင်း လိုက်ပို့နေတယ် ။ဈေးထဲမှာ နံစော်နေတာပဲ ဈေးထဲလာ
တုန်း ကျန်းမာရေးအရ အပေါ့အလေးသွားရင် အနံ မခံနိုင်လို အောင့်ထား
ရတယ်။ ဈေးကောက်တွေ ကလဲ မြို့တိုင်း သတ်မှတ်ထားတာထက်ပိုကောက်
တယ်။ လမ်းခင်းတာတွေကို ဆောက်လုပ်ရေးလို တင်ဒါပေးပြီး လူတွေလျော့
သင့်တယ်။ စည်ပင်ဝန်ကြီးတွေက ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လုပ်မလုပ်စစ်ပါ။
အဘ အဘနဲ့ စည်ပင် စားဖားတွေ ခေါ်တာဟုတ်လှပြီမထင်နဲ့။
အရင်ခေတ်က ကတ္တရာလမ်း တထွာလောက် ကို နေ့ကြီး ရက်ကြီးတွေမှာ
အဖွင့်ပြပြီး လုပ်စားလာတဲ့ သူတွေပါ။ စည်ပင် အရာရှိ(ညွှန်မှုး/DySE) တွေ
ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှု ဟာ သိန်းပေါင်း သောင်းချီ ချမ်းသာကြတယ်။
သေချာစီစစ် ကြည့်ပါ။ ခေတ်ပြောင်းစနစ်ပြောင်းမှာ နေရာတွေ ပြောင်းပြီး
ဝန်ကြီးဌာန ထဲမှာပဲ ပြောင်းပေးကြည့်ပါ။ နတလ ပညာရေး ကျောင်းက
အဖွဲ့ တွေနဲ့ ပြောင်းပေးပါက သစ္စာ ရှိသေးရဲ့ လားဆိုတာ တွေ့ရလိမ့်မယ်။
ရန်ကုန်သား ပြောတာတွေ မှန်တယ် ။ Right /;/;
ရန်ကုန်သားနဲ့ TTချို ရေ ကျေး စည် ဆိုတဲ့ အတိုင်း ချာချာလည်နေတယ်
ဇာတိမြို့ ကိုပြောင်းချင်လို့ ဆန္ဒပြု ထားတာ တိုင်းစည်ပင် ညွှန်မှုးအာဏာ
ရူး တဏှာရူး နှာဘူးတွေရဲ့ မတူသလို အပြောအဆို ခံနေရတယ်။
မြန်မြန် စုဖွဲ့ကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
စည်ပင်တွေမှာလဲ တရုတ်ကားအစုပ်နဲ့ အပြိုကြီးတစ်အုပ်ပဲကျန်တော့တယ်